yType Ukukhutshwa kwesoftware kunye noKhuphiswano. yType - Ukuchwetheza i-Accelerator-Ukunceda Bonke Abasebenzisi beMac basebenze Phantsi kwaye bafeze okungakumbi. | Plum emangalisayo
Ngamana 16, 2011
Ukukhutshwa kweSoftware kunye noKhuphiswano. yType-Ukuchwetheza okuKhawulezayo- Ukunceda bonke abaSebenzisi beMac basebenze ngokuNcinci kwaye bafeze ngakumbi.
UMHLA: 16 Meyi 2011
I-yType sisixhobo esitsha sokuvelisa esisebenza ngasemva ukukhulisa amandla akho okuchwetheza. Chwetheza oonobumba abambalwa (esikubiza ngokuba yindlela emfutshane) ukunamathisela ibhloko enkulu kakhulu yombhalo (ebizwa ngokuba lulwandiso) efana negama lakho, url, umfanekiso okanye amaphepha aliqela eteksti efomatweyo naphina kuyo kwi-Mac yakho nasiphi na isicelo. yType ngoko nangoko yenza ukuba nawuphi na umsebenzisi we-Mac abe nemveliso ngakumbi.
yType 1.0 isebenza kwi-10.5 okanye ngaphezulu. yType inokukhutshelwa apha kwiPlum emangalisayo okanye kwivenkile yeApple Mac App.
Isikhokelo se-yType ngesiNgesi, isiFrentshi, isiJamani, isiTaliyane, isiJapanese, iSpanish, isiSweden, kunye nesiRashiya.
QHAGAMSHELANA: NjengePlamu emangalisayo yeFacebook iphepha ukuphumelela enye yezinto ezili-10, nokuba yType, CopyPaste, iClock, iWatermark Software okanye iMeko yeSuphu yeJusi yeJuzi ye-4 ye-iPhone. Cofa iqhosha elifana nePlum emangalisayo kwi-Facebook iphepha ngalo naliphi na ixesha phakathi ngoku kunye nokuphela kokhuphiswano ngoJuni 1, 2011 ukungena. Bonke abalandeli ku facebook.com/plumamazing nge-1 kaJuni baya kungeniswa kumzobo ongahleliwe kwaye banikwe ibhaso eli-1 kwali-10.
Ngaba uyakhathala ngokuchwetheza i-url, idilesi okanye ileta yokuphendula ngalo lonke ixesha? Gcina iiyure zexesha, uchwetheze amakhulu wabalinganiswa kunye noxinzelelo ezandleni zakho, amehlo kunye nengqondo yokwenza into enye uphindaphinde. Yile nto ilungiselelwe iikhompyuter. Sebenzisa yType kwaye chwetheza oonobumba abambalwa kunye nesithuba sokungena kulo naluphi na uxwebhu igama, isivakalisi, iphepha, amaphepha angama-20 okanye nangaphezulu nangoko. Sebenzisa yType 'ukwenza okuncinci kwaye ufeze okungakumbi'.
Enye indlela yType enokuligcina ngayo ixesha kukuchwetheza iisimboli kunye nokunye okunzima ukufumana oonobumba be-unicode. Yenza amagama akho amfutshane okhethekileyo anje nge-vcheckmark ukwandisa kwisimboli? okanye vheart ye ♥, vcent ye ¢, veuro nge €, vblackknight ye?, vyinyang ye?, vumbrella ye?, vc ye ©, vr ye ®, vtm ye ™, njl.
Ngaba unayo i-Hippopotomonstrosesquipedaliophobia? Olo luloyiko lwamagama amade. Uhlobo lunyango lwesi sifo soyikekayo esihlasela abantwana abafana nenkwenkwe yaseHawaii egama linguKananinoheaokuuhomeopuukaimanaalohilo. Uhlobo luya kumvumela ukuba achwetheze u-'ka 'kunye nendawo okanye abuyele ekwandiseni igama lakhe kwangoko emgcinela amawaka eeyure anokuzisebenzisa ngexesha lokuphila kwakhe ngokuchwetheza igama lakhe.
isebenza ngasemva kwaye ikhawulezisa i-anyones typing.
Yenza indlela emfutshane (oonobumba abambalwa) abaya kuthi xa bechwetheza bangene kwiibhloko ezinkulu zombhalo okanye imifanekiso kunye netekisi efomathiweyo kuso nasiphi na isicelo se-mac.
Khuphela kunye nokuncamathisela okanye ukutsala iibhloko zesicatshulwa, imifanekiso okanye isicatshulwa esenziwe fomathi.
Sebenzisa izinto ezahlukeneyo ukufaka inyanga, usuku, unyaka, ixesha, isikhombisi, ixesha.
shumeka umahluko omnye ngaphakathi kwesinye.
Khangela zonke iindlela ezinqumlayo / zokwandiswa.
Khetha isicatshulwa kunye nokubetha i-hotkeys ukuvula i-yType kunye nokudala indlela emfutshane.
zasekhaya kunye nezibhalo ezifumanekayo ngesiNgesi, isiFrentshi, isiJamani, isiTaliyane, isiJapanese, iSpanish, iSweden, kunye nesiRashiya. Nceda uncede ulwimi lwethu.
Iphepha lolwazi le-yType
Khuphela isilingo kwiPlum emangalisayo
Ukuthengwa kwiPlum emangalisayo
Ukuthenga kunye nokukhuphela kwiVenkile yeApple yeApple
Olu nxibelelwano lweendaba liphuma kwikhonkco kwiPlum emangalisayo
yType sisixhobo sokwenza imveliso esisebenza ngasemva ukukhulisa amandla akho okuchwetheza. Chwetheza oonobumba abambalwa (indlela emfutshane) ukunamathisela ibloko enkulu kakhulu yombhalo (ulwandiso) njengegama lakho, url, umfanekiso okanye amaphepha aliqela eteksti efomathiweyo naphi na kwi-Mac yakho nasiphi na isicelo. yType ngoko nangoko yenza ukuba nawuphi na umsebenzisi we-Mac abe nemveliso ngakumbi. IPlum emangalisayo ikwaxhasa ukhuphiswano kunika ikopi ezi-3 zeYType kunye nezinye izinto ezi-6 (CopyPaste, iKey, iClock kunye neWatermark) kunye ne-1 Super-Juice Power Case ye-iPhone 4 yokufaka nje iqhosha elifana nePlum emangalisayo Iphepha le-Facebook.
IPlum emangalisayo (ngaphambili iSoftware) yinkampani yabucala ebekelwe i-iPhone, iMac, iiWindows kunye nezicelo zeselula. I-Plum Amazing ngumnikezeli wehlabathi wezicelo zeselfowuni kunye needesktop ukusukela ngo-1995. I-Plum emangalisayo iyenza eyayo i-shareware kwaye yenza isivumelwano nakwezinye iinkampani.
Iimpawu ezilungileyo zeMedia ngolwazi oluthe kratya kunye nekopi yokujonga isoftware yethu, nceda unxibelelane nathi.